Mogadishu Journal » 2019 » January » 11
Guddiga Doorashooyinka Qaranka Oo Xilka Ka Qaaday Guddoomiye ku xigeenka Guddi
Mjournal :-Qoraal ka soo baxay Guddiga madaxabannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa lagu sheegay in xilka ka qaadeen guddoomiye ku-xigeenka guddiga Sayid Cali Sheekh. Guddiga ayaa ku eedeeyay guddoomiye ku xigeenka inuu ku tuntay sharuucda guddiga isla markaana uu guddoomiye ku...
Mjournal :-Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa soo xiray kalfadhigiisii afaraad ee soo socday, waxaana kalfadhiga lagu soo xiray qoraal ka soo baxay Guddoomiyaha Golaha. oraalka ka soo baxay Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi C/llaahi ayaa lagu...
Mjournal :-Saddex qof ayaa maxkamad lagu soo taagay dalka Zimbabwe, kuwaas oo lagu eedeeyey in ay xadeen boorso ay ku jirto $150,000 oo kaash ah oo uu lahaa madaxweynihii xilka laga tuuray ee dalkaas, Robert Mugabe. Tuugada la tuhunsan yahay ayaa la sheegay in ay lacagtaas ku...
Mjournal :-Waxaa lagu guuleystay in la damiyo dabkii xalay ka kacay Suuqa weyn ee Bakaaraha oo ah Suuqa ugu weyn Soomaaliya, islamarkaana ay ku yaallaan ganacsiyo kala duwan. Dabka ayaa ka kacay qeybta Hudheyda dukaan yar oo ku yaalla, waxaana uu gaaray ilaa iyo qeybta Maacuunta...
Wasaaradda Amniga oo xabsiga dhigtay Sarkaal ka tirsan Ciidanka Booliska
Mjournal :-Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay xabsiga dhigtay Sarkaal ka tirsan Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo dhawaan Muuqaal laga soo duubay xilli uu qof haween ah Aflagaadeynaayay. War kasoo baxay Wasaaradda Amniga Gudaha ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in...